Archive du 20191108
Alain Ramaroson “Miaraka amin’ny filoha tanteraka aho”
Niara-niafy, niara-nitolona izahay tamin’ny 2009 ireny, ka ataoko ahoana no tsy hiaraka amin’ny filoham-pirenena Andry Rajoelina fa dia manohana azy ary hiaro azy hatramin’ny farany aho,
Tompondakan’i Afrika 2019 Basikety 3 x 3 Hanomboka anio any Ouganda
Any an-drenivohitr’i Ouganda manomboka anio zoma 08 novambra ka hatramin’ny 10 novambra 2019 izao no hanatanterahana ny fiadiana ny ho tompondakan'i Afrika 2019 eo amin’ny taranja basikety 3x3 .
Edito Mitohy ny fiainana
Lasa ary napetraka any amin’ny toerana tokony hisy azy farany indray iny ny andrarezin’ny kanto malagasy sy fiarahamonina iray.
Mitohy ny krizy Ho mafy ny fisondrotry ny vidim-piainana…
Mampanahy ny ho tohin’ny fiainam-pirenena eo amin’ny lafiny ara-toekarena sy ara-tsosialy noho ny antony maromaro.
Haisoratra Voarafitra anaty boky ny zava-bitan’ny Barea
Voarafitra anaty boky 22 pejy ihany ny tantaran’ny ekipam-pirenena ny Barean’i Madagasikara. Ramatoa Verenako Miriam, mpikambana ao amin’ny akademia no nanoratra azy,
Tarika Mahaleo Ireo tsiambaratelo, tora-po sy hafatra…
Akaiky an’i Dadah Mahaleo izay natao veloma farany tao amin’ny katedraly Analakely no nizara ny tsiambaratelony.
Fiara nipitika avy eny ambony tetezana Roa maty, naratra avokoa ireo mpandeha
Nitrangana lozam-pifamoivoizana mahatsiravina tamin’ny lalam-pirenena fahafito, omaly atoandro teo amin’ny tetezan’Ankadilalana, anelanelan’i Behenjy sy Ambatolampy.